Shandong New Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Fitaovana Co., Ltd. dia avo-pirenena teknolojia orinasa misahana manokana ny famokarana fitaovana CNC milina. Ao amin'ny filozofia ny "olona-mirona, Technical Innovation", ilay orinasa antra tsy misy ezaka mba hamorona "haingam-pandeha, avo-marina tsara, avo-azo itokisana" CNC fitaovana amin'ny format manan-tompo fananana ara-tsaina zo amin'ny hiatrehana ny toe-be ara-toekarena hery, matanjaka ara-teknika talenta mandroso hery sy ny raharaham-barotra ny filozofia.
Amin'ny alalan'ny taona maro ny ezaka, ny orinasa dia soa aman-tsara lasa kely CNC fametrahana mazava tsara mandeha ho azy barany lathe (matetika fantatra amin'ny anarana hoe fametrahana mazava tsara mandeha ho azy lathe) izay mizara ho AK andian-dahatsoratra, SM andian-dahatsoratra, SX andian-dahatsoratra sy ny SC andian-dahatsoratra, dia manana ny anjara-fitotoam-bary fitambaran'ny asa, ary indrindra azo ampiharina ho an'ny lehibe-batch maro-karazana avo-machining asa fametrahana mazava tsara ny manifinify-lavaka sy miodina faritra sarotra kely. Ny vokatra manana fahaizana avo fihazonana marina tsara, mifanentana amin'ny faritra lehibe hanahafana marika malaza iraisam-pirenena, ary koa ny famokarana sy ny teknolojia dingana nitarika ao Shina. Ny vokatra dia be machined ampiharina amin'ny fifandraisana, ara-pitsaboana milina, refrigeration, Optical fitaovana, fitaovana an-trano, aerospace, fiara, môtô, elektronika, Motors, famantaranandro orinasa sy ny orinasa hafa.
Hatramin'ny ny piandohany, Shandong New Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Fitaovana Co., Ltd. dia mifototra amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana sy ny famokarana ny avo-end CNC lathes. Ny raharaham-barotra ao amin'ny filozofia ny "Constant Fanatsarana, Customer Tampony", ny orinasa dia natokana ho lasa mpitarika izao tontolo izao-mpanamboatra fitaovana sy ny tolotra.